श्रीपञ्चमीमा अनाथ तथा असहाय बालबालिकालाई सहयोग - Gandak News
श्रीपञ्चमीमा अनाथ तथा असहाय बालबालिकालाई सहयोग
गण्डकन्यूज द्वारा १६ माघ २०७६, बिहीबार १८:२४ मा प्रकाशित 0
पोखरा । श्रीपञ्चमीको अवसर पारेर एस.टी. क्रियशन म्यानेजमेन्ट प्रा।लिका सदस्यहरुले अनाथ तथा असहाय बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक सामााग्री, लत्ता कपडा, खाद्यान्न सामाग्रीसहित नगद सहयोग प्रदान गरेका छन् ।
पोखरा-१५, टुटुङ्गामा अवस्थित सृजनशील बालविकास बालगृहमा आश्रित १५ जना बालबालिकाहरुको शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगति होस् भन्ने हेतुका साथ सहयोग कार्यक्रम आयोजना गरेको कार्यक्रम संयोजक आशिष पुरीले जानकारी दिए ।
विभिन्न कार्यक्रम मार्फत उठेको रकमको केही नगदसहित पचास हजार रुपैंया बराबरको शैक्षिक सामाग्री, लत्ता कपडा, खाद्यान्न सामाग्री लगायत प्रदान गरिएको एस.टी. क्रियशन म्यानेजमेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुरज थापाले बताए । उक्त सहयोग कार्यक्रमबाट सृजनशील बालविकास संस्था आभारी रहेको संस्थाका सञ्चालक शंकर पन्थले बताए ।
देशभरका बिभिन्न ठाँउबाट बालगृहमा आश्रय लिएको र सञ्चालनका लागि आर्थिक अभाव भएका कारण संस्थालाई अन्यले पनि यसरी नै सम्झन समेत अग्रह गरे । देश तथा बिदेशका मनकारी व्यक्तित्व तथा बिभिन्न संघ संस्थाहरुको सहयोगले संस्थामा रहेका बालबालिकाहरुले आवश्यक आवश्यकता पूर्ति गर्न सहयोग पुगेको र थप सहयोगको अपेक्षा संस्थाले राखेको छ ।
सहयोग कार्यक्रममा एस.टी. क्रियशन म्यानेजमेन्ट प्रालिका निर्देशक ईनिशा दुरामगर लगायतको सहभागिता थियो । विगत ५ वर्षदेखि पोखरामा रहेर इभेण्ट अयोजनासँगै म्यानेजमेण्ट लगायत उत्प्रेरणा र जनचेतनामूलक कार्यक्रम, खेलकुद र सामाजिक कार्यहरु गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको एस.टी. क्रियशन म्यानेजमेन्टले हालसम्म थुप्रै सौन्दर्य प्रतियोगिताको आयोजना गरिसकेको छ ।